Nepal Engineers' Association
Engineers' Bhawan, Pulchowk info@neanepal.org.np +977-1-5010251, 5010252
ईन्जिनियरको न्युनतम पारिश्रमिक र ‘सेवा ऐन’
Posted on Sep 11, 2019 Posted by SuperAdmin0Comment
ईन्जिनियरको न्युनतम पारिश्रमिक र ‘सेवा ऐन’का लागि संघर्षरत छौँ: छविराज पोख्रेल(अन्तर्वार्ता)
नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसियसन (नेईए), पैसा छैन, माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बन्ने योजना कार्यान्वयनतर्फ लागेको महासचिव छविराज पोख्रेलले बताएका छन् । त्यसका लागि ईन्जिनियर्स हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारिएको र ईन्जिनियर्स हाइड्रो अबको २/३ महिनामा सुरु हुने उनले दाबी गरे ।
गत चुनावमा प्रगतिशिल ईन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल(पिन)ले ईन्जिनियर्स हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो अनुसार काम अगाडि बढेको महासचिव पोख्रेलले बताएका हुन् । एसोसियसनका प्रदेश तह पनि आत्मनिर्भर हुने उनको भनाई छ । ‘ईन्जिनियर्स एसोसियसनलाई पैसा छैन । माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बनाउँदैछौं । दुई वर्ष भित्र एउटा प्रदेशले कम्तिमा एक करोडसम्मको आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता राख्छ भन्नेमा पुर्याउछौं ।’ पोख्रेलले भने ।
महासचिव पोख्रेलले आगामी साउन १ गतेदेखि नेइएमा आवद्ध सबै ईन्जिनियरहरुको दश लाख बराबरको बीमा सुरु हुने पनि बताए । चुनावी एजेण्डाको कार्यान्वनको विषयमा केन्द्रित रहेर महासचिव पोख्रेलसँग हटलाइनखबरले गरेको कुराकानी:
स्टाफ कलेज खोल्छु भन्दै चुनाव लड्नु भएको थियो । बजेटमा समेटियो । खुसी हुनुहुन्छ होला नी !
हो, स्टाफ कलेज खोल्ने विषय हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा थियो । यो विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएर आएको छ । अब स्टाफ कलेज खुल्ने पक्का भयो । स्टाफ कलेज खुल्ने पक्का नभएसम्म अरु सबै भए पनि मलाई निन्द्रा लाग्दैनथ्यो । अब भने सहज भएको छ ।
विगतमा हामीले स्टाफ कलेज खोल्नुपर्छ भन्दै आयौं । निरन्तर पहल गरिरह्यौं । अब बजेट वक्तव्यमै समेटिएपछि यो विषय नेपाल सरकारको भयो ।
यसका लागि सम्पूर्ण ईन्जिनियरहरु, सरोकारवालाहरु, सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका रह्यो । उहाँहरु सबैलाई र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
स्टाफ कलेज मात्रै होइन बजेटमा पुर्वाधार विकास प्रधिकरण गठन गर्ने विषय पनि आएको छ । यो पनि हाम्रो एजेण्डा अन्र्तगत बजेटमा समेटिएको छ । हामीले आगामी दशकलाई सरकार मार्फत आगामी दशकलाई पुर्वाधार दशक घोषणा गछौं र त्यसका लागि पुर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्नेछ भनेका थियौं । सोहीअनुसार वजेटमा आएको छ ।
यी दुबै एजेण्डा पुरा भए । बजेटमा आएपछि त अब काम गर्ने हो ।
ईन्जिनियर्स हाइड्रो लगायतका एजेण्डाहरु पनि थिए, ८० प्रतिशत एजेण्डा एक वर्ष भित्र पुरा गर्छौं भन्नुभएको थियो । ती कहाँ पुगे ?
८० प्रतिशत होइन हामीले त्यो भन्दा धेरै उपलब्धी हासिल गर्छौं एक वर्षको बीचमा । मुख्यगरी हामीले ६ वटा विषय उठाएका थियौं ।
स्टाफ कलेजको विषय बजेटमा समेटियो । यो पुरा भयो । भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णमा खटिएका ईन्जिनियरहरुको सेवा सुविधा बढाउने कुरा थियो । यो पनि पुरा भयो ।
हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन पनि हाम्रो एजेण्डा हो । काउन्सिलले परीक्षा लिने र पास भएपछि मात्रै ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर काउन्सिलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएका हौं ।
अहिले ६० प्रतिशतसम्म थप इन्सेन्टिभ पाउन सक्ने अवस्था छ । यसरी मुख्य एजेण्डा पुरा गर्यौं ।
अब हामीले उठाएका अन्य तीन वटा कुरा बाँकी छन् । एउटा ईन्जिनियर्स हाइड्रो र अर्को ईन्जिनियरहरुको न्युनतम तलब । साथसाथै हामीले ईन्जिनियरिङ सेवा ऐनको कुरा पनि गरेका छौं ।
हामीले निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भित्र मुख्य एजेण्डामा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्छौं भनेका थियौं । यी मध्ये ईन्जिनियरिङ सेवा ऐन ल्याउन समय लाग्ला । अहिले ड्राफ्टिङको काम भइरहेको छ । हाम्रो छुट्टै ऐन छैन । निजामती सेवा ऐन अन्र्तगत छौं । एउटै सेवामा एउटालाई छैटौं तह र अर्कोलाई सातौं तह बनाउन त मिल्दैन । यो सबैले बुझ्दैनन् । बुझेनन् भनेर कोलाहल मच्चाएर पनि भएन । जड कहाँ हो भनेर हेर्नुपर्यो । त्यो भनेको छुट्टै ऐन हो । ऐन आउँछ ।
ईन्जिनियरहरु अमर्यादित पनि छन् । अपहेलित पनि छन् । मर्यादाभित्र नबस्ने । र अपहेलानामा परेको दुबैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन आए पनि ईन्जिनियरहरुलाई मर्यादित बनाउँछ र इज्जतका साथ काम गर्ने वातावरण बन्छ ।
हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन पनि हाम्रो एजेण्डा हो । काउन्सिलले परीक्षा लिने र पास भएपछि मात्रै ईन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर काउन्सिलसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएका हौं । यो छिट्टै आउने विश्वास छ ।
यो ऐनको आवश्यकता किन पर्यो भने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने भएपछि विद्यार्थीले बढी अध्ययन गर्छन । कलेजहरुले पनि आफ्ना सबै विद्यार्थी पास गराउन थप मेहनत गर्छ । यसले ईन्जिनियरहरुको दक्षता र क्षमता नै बढाउने हो । कलेज पढाइमा सुधार गर्न बाध्य हुन्छ । विद्यार्थीहरु जेहेन्दार हुने भए । र सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि एकरुपता कायम गराउने भनिएको छ ।
ईन्जिनियरहरुको बीमा, ईन्जिनियर्स हाइड्रो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
चुनावमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुमध्ये एउटा ईन्जिनियरहरुको बीमा पनि हो । ईन्जिनियर्स एसोसियसनमा आवद्ध सबैको प्रति ईन्जिनियर दश लाख बराबरको इन्सुरेन्स गराउने कुरा छ । यो आगामी साउन १ गते देखि लागू हुने तयारी छ ।
एसोसियसनमा आवद्ध भएका सबैको दश लाख बराबरको बीमा हुन्छ । बीमाका लागि छुट्टै कुनै शूल्क लाग्दैन । बीमा शूल्क नेईएले नै तिर्छ । मात्रै एसोसियसनको सदस्यता लिएको र निरन्तर सदस्यता नवीकरण गरेको भए पुग्छ ।
अर्को ईन्जिनियर्स हाइड्रो दुई/तीन महिनाभित्र सुरु हुन्छ । यसका लागि हामीले संरचना बनाउने लगायतका विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ । ईन्जिनियर्स हाइड्रो कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समिति भन्ने । त्यसमा केन्द्रको अध्यक्ष र महासचिव रहने । सातै प्रदेशका प्र्रदेश अध्यक्षहरु पनि रहने । यसरी ९ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने ।
पहिलो लटमा सातै प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट एक/लाख लगानी गरेर रकम जुटाउने । एसोसियसनका केन्द्र र प्रदेशमा गरी १३५ जना पदाधिकारी छन् । यसरी एक करोड ३५ लाख रकम जम्मा हुन्छ । त्यसपछि एसोसिएशनमा आवद्ध ईन्जिनियरहरुलाई समावेश गर्ने योजना छ । यसबाट ३५ मेगावाट सम्मको आयोजना आफैँ बनाउन सकिन्छ । यो विषयमा उर्जा मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी कार्यालय लगायतका ठाउँमा छलफल चलिरहेको छ ।
ईन्जिनियर्स एसोसियसनमा पैसा छैन । माग्नुपर्छ भन्नेबाट आत्मनिर्भर बनाउने छौं । आगामी दुई वर्ष भित्र एउटा प्रदेशले कम्तिमा एक करोड सम्मको आयोजनामा खर्च गर्ने क्षमता छ भन्नेमा पुर्याउछौं ।
अबको यहाँहरुको प्राथमिकता के हो ?
तीनवटा एजेण्डा पुरा भए । गोरेटो बाटो आयो । बाटो बनेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । अब मुख्य दुई एजेण्डा हुन् ।
पहिलो लटमा सातै प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट एक/लाख लगानी गरेर रकम जुटाउने । एसोसियसनका केन्द्र र प्रदेशमा गरी १३५ जना पदाधिकारी छन् । यसरी एक करोड ३५ लाख रकम जम्मा हुन्छ ।
न्युनतम ज्याला र ईन्जिनियरिङ सेवा ऐन । ईन्जिनियरिङ सेवा ऐनको प्रगति अघि पनि भनेँ । बाँकी रह्यो न्युनतम ज्यालाको विषय । यो पनि छिट्टै सकिन्छ जस्तो लागेको छ । सरकारी निकायमा तोकिएकै छ । नीजि क्षेत्रका लागि पनि तोकिनुपर्यो भन्ने हो । सरकारी बराबर तोकिदिए त भइगो । आधार सरकारी मान्ने हो ।
कमसेकम सरकारी भन्दा नीजि क्षेत्रमा कम नहोस भन्ने हो ।
नेइएकै आन्तरिक कामहरु पनि भइरहेका होलान ……
हामी आन्तरिक काम पनि गरिरहेका छौं । अहिले मुख्य दुई कुरा गर्दैछौं । जस्तै भएपनि हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कमसेकम संस्थाको खरिद विनियमावली चाहिन्छ । हामीले गरेका सबै कामहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । यो भएर खरिद विनियमावली तयार गर्दैछौं ।
अर्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बनाउँदैछौं । यसमा कर्मचारी कति चाहिने । कसको जिम्मेवारी के हुने ? यी कुराहरु समेटिन्छन् ।
धेरै ईन्जिनियरहरु नेईए बाहिर छन् । तिनलाई सदस्यता दिलाउने विषयमा केही भएको छैन ?
यो विषयमा पनि हामी लागेका छौं । अहिले सदस्यता लिनका लागि केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई थप सहज बनाउनका लागि प्रदेशबाटै सदस्यता लिन सक्ने ब्यवस्था मिलाउँदै छौं । प्रदेशले नै सदस्यता दिन्छ । त्यसको जानकारी केन्द्रमा गराउँछ । सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरुसँग बसेर यो विषयमा कुरा भएको छ ।
यसो गरियो भने सदस्यता लिन सहज हुन्छ र नेइए बाहिर रहेका ईन्जिनियरहरु टाढा भएकै कारण सदस्यता लिनबाट बन्चित हुने छैनन् ।
अर्को विषय साउनबाट ईन्जिनियरहरुको बीमा सुरु हुँदैछ । ईन्जिनियर्स हाइड्रोमा सेयर हाल्नका लागि नेईएको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनेछ । यसले नेईएप्रति आकर्षण बढ्छ । ईन्जिनियरहरु आफैँ सदस्यता लिन आउँछन् ।
अन्तिममा, उर्जा क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको योजना र बजेट कस्तो लाग्यो ?
पहिलेको जस्तो नै छ । बलास्टिक चेञ्ज छैन । तर दुई वटा कुरा राम्रा आएका छन् । एउटा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेघा प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने छ ।
अर्को जनताको जलविद्युतमा हामी सबै संलग्न भएका थियौं । यो बजेटमा आएको छ ।
पहिले मन्त्रालयस्तरमा छलफल हुन्थ्यो भने यो अब ठूलो भयो । बजेटमा कार्यक्रम नै छिर्यो । १९ वटा प्रोजेक्टको नामै लिएर छिर्यो र सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय संसदबाट पास भयो । पहिले उर्जा मन्त्रालयको हो कि भन्ने हुन्थ्यो । अब त्यो रहेन ।
उर्जा क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा जोड दिइएको छ । र स्वदेशी लगानी र स्वदेशी ऋणका लागि पनि प्रोत्साहन गरिएको छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र दुई नम्बर प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने पनि भनिएको छ । यो पनि सकारात्मक छ ।
Nijgadh International Airport at 7:19 am, Wednesday, September 11th, 2019
ईन्जिनियरको न्युनतम पारिश्रमिक र ‘सेवा ऐन’ at 6:52 am, Wednesday, September 11th, 2019
58th Engineers’ Day at 12:38 pm, Sunday, July 19th, 2020
Managing the Impact of COVID-19 on Engineering Education
तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन २०१९
शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापन कार्यक्रम
3 Days Orientation Training
First Voter List 2077 – Final
National Earthquake Safety Day-2016 (Part III)
President’s Interview in Karobar daily
Biratnagar Polling Center (Province No. 1)
Dhangadhi Polling Center (Sudurpaschim Province)
Engineers' Bhawan, Pulchowk, Lalitpur
Sign up to our newsletter to get latest news and updates from the engineering association in all provinces.
Powered by Luniva Tech.
LOGIN | REGISTER | WEBMAIL